तीनैजनाको कल डिटेलमा को-कोसंग छ सम्पर्क ? पुरा पढ्नुहोस - Muldhar Post
तीनैजनाको कल डिटेलमा को-कोसंग छ सम्पर्क ? पुरा पढ्नुहोस
पत्रपत्रिका खबर २०७६, ६ भाद्र शुक्रबार 482 पटक हेरिएको
पत्रकार शालि’कराम पुडा’सैनी आत्मह’त्या प्रकरणको छानबिन गरिरहेको प्रहरीले रवि लामि’छाने, युवराज कँडेल र रुकु भनिने अस्मिता कार्कीको कल डिटेल निकालेर विश्लेषण गरेको छ । प्रकरणको केन्द्रमा रहेकी युवती अस्मिता कार्कीको मोबाइलमा ‘सिधा कुरा जनतासँग’को प्रसारण संस्था न्युज २४ को ल्याण्डलाइन नम्बरबाट पटक–पटक सम्पर्क भएको देखिएको छ। यो नेपाल खबरबाट लिएका छाैं ।
‘सिधा कुरा जनतासँगको प्रसारण संस्था न्युज २४ को टेलिफोन नम्बरबाट रुक भनिने अस्मिता कार्कीसँग पटक–पटक सम्पर्क भएको देखिएको छ। शालि’करामले न्युज २४ छोडिसकेको अवस्थामा समेत यसरी सम्पर्क हुँदा बढीमा ५ मिनेटसम्म कुराकानी गरेको भेटिएको छ’, घटना अनुसन्धान गरिरहेका एक प्रहरी अधिकृतले नेपालखबरसँग भने। पत्रकार शालि’कराम पुडासै’नीले ‘सिधाकुरा जनतासँग’ छोडेर माउन्टेन टेलिभिजन गइसकेपछि पटक–पटक सम्पर्क देखिएको विषयलाई अनुसन्धान अधिकारीहरुले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन्।
स्रोतहरुका अनुसार रवि लामि’छानेको मोबाइलबाट सिधै अस्मितालाई सम्पर्क गरिएको छैन। रविले सामान्यतः आफ्नो मोबाइलबाट कसैसँग पनि कुराकानी गर्दैनन्। फोन समेत रिसिभ गर्दैनन्। उनले सहयोगीमार्फत् मात्र मान्छेहरुसँग टेलिफोन कुराकानी गर्छन्।
रविको बयानमा के छ? शालिक’रामलाई आत्मह’त्या गर्न दुरुत्साहन गरेको कसुरमा चितवन प्रहरी हिरासतमा रहेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रविले सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन्। बयानमा उनले सबै किसिमका आरोप इन्कार गरेका छन्। पत्रकार पुडासै’नीको आत्मह’त्यामा आफ्नो संलग्नता, योजना तथा सम्पर्क केही नरहेको उनको दाबी छ। घटनाकी केन्द्रीय पात्र भनिएकी रुकु भनिने अस्मिता कार्कीलाई म चिन्दिनँ। उनीसँग कुनै किसिमले सम्पर्क पनि गरेको छैन’, उनको बयान उदृत गर्दै चितवन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो।
शालिक’रामसँग न्युज २४ टेलिभिजन छोडेपछि कुनै सम्पर्क नभएको रविले बयानमा उल्लेख गरेका छन्। ‘मैले शालि’करामलाई कुनै किसिमको धाकध’म्की दिएको छैन। घटनामा मेरो कुनै संलग्नता छैन’, रविले बयानमा भनेका छन्। प्रहरीले घटना केन्द्रित रहेर तयार पारेका प्रश्नावली रविलाई सोधेको थियो। उनले सबै आरोपहरुको इन्कारी बयान दिए।
‘भिडियोमा के छ थाहा छैन’-रविसँगको बयानमा शालि’करामले मृत्यु पूर्वको बयान (डाइङ डिक्लिरेसन) मा उनको नाम र आरोपका विषयमा समेत प्रश्न सोधेको थियो। उनले सो भिडियोबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बयानमा उल्लेख गरेका छन्। ‘न्युज २४ छोडेर गएपछि मेरो शालिक’रामसँग कुनै किसिमको सम्पर्क भएको छैन। भिडियोमा उनले मेरोबारेमा के बोलेका छन् त्यो मैले हेर्न पाएको छैन। त्यस विषयमा मलाई केही जानकारी भएन’, उनले बयानमा भनेका छन्। शालि’कराम आत्मह’त्या प्रकरणमा भिडियो सार्वजनिक भएपछि लामिछा’नेसहित तीनै जना पक्राउ परेका हुन्। अर्थात् उनी प्रहरी हिरासतमा जानुअघि नै भिडियो बाहिरिएको हो।
भिडियो सार्वजनिक भएसँगै उनले फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेरै शालिक’रामले लगाएका आरोपको खण्डन गरेका थिए। ‘आरोप लगाउने मरेर गए पनि आरोप खेप्ने म जिउँदै छु। मर्नेले लगाएको एउटा मात्रै आरोप प्रमाणित होस्, र हदै सम्मको सजाय होस्’, उनले भनेका थिए, ‘थप जानकारी केही समयमा गराउने छु। सारा आरोप सुन्दा लाग्यो शालि’कराम लाई ठूलो भ्रम परेछ।’ पुडा’सैनीले मृ’त्युअघि रेकर्ड गरेको भिडियोमा भएको आवाज उनकै भएको फरेन्सिक ल्याब परीक्षणबाट पुष्टि भइसकेको छ। प्रहरीले यसअघि नै उनको मोबाइल सञ्चालन भएयताका सबै डाटा रिकोभर गरिसकेको छ। पुडा’सैनी मृ’त्यु घटनाको अनुसन्धानकै लागि भनेर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का प्रवक्ता एसपी दीपक रेग्मी चितवनमै छन् ।
आइतबार मुद्दा बुझाउने तयारी-प्रहरीले दोस्रो पटक लिएको पाँच दिनको अनुसन्धान म्याद आइतबार सकिँदैछ। अनुसन्धान अधिकारीहरुले सोही दिन मुद्दा अदालतमा बुझाउने तयारी गरिरहेको जनाएका छन्। रविको विषयमा देशभर घटनाक्रम बढेपछि प्रहरीलाई चाँडो मुद्दा बुझाउन दवाब परेको छ। प्रहरीले आरोपीको बयान, महत्वपूर्ण कल डिटेल, डिजिटल फरेन्सिक ल्याब(डिएफएल) को प्रतिवेदन र पोष्टमार्टम रिपोर्टलाई प्रमाण बनाउँदै मुद्दाको तयारी गरेको हो। २०७६ भदौ १ गतेदेखि कार्यन्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताअनुसार आत्म’हत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्ति पनि कसुरदार ठहरिन्छ। यही कानुनका आधारमा प्रहरीले रवि लामि’छाने, युवराज कँडेल तथा अस्मिता पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ।
अस्मिता कार्कीले दिईन यस्तो बयान-यो खबर हामीले नेपालखबरबाट लिएका हौ । प्रहरीले पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरण अनुसन्धानका लागि ३० साउन २०७६ मा काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लिएकी अस्मिता कार्की र ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रमका संवाददाता युवराज कँडेलसँग बयान लिएको छ। पत्रकार पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा चितवन प्रहरीले रवि लामिछानेसहित तीनजनाविरुद्व अदालतबाट म्याद लिएर आत्महत्याका दुरुत्साहन अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार युवराजसँग लिखित र अस्मितासँग भिडियो बयान लिइएको छ। प्रहरीसँगको भिडियो बयानमा अस्मिताले सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका आफ्ना पूर्वप्रेमीसँग अनुहार मिलेकाले शालिकरामलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा साथी बन्न अनुरोध पठाएको बताएकी छन्। फेसबुक चलाइरहँदा शालिकरामको फोटोसहित ‘पिपुल मे यु नो’ भन्ने देखेपछि अनुरोध पठाएको उनले उल्लेख गरेकी छिन्। ‘फेसबुकमा साथी भएपछि कुराकानी हुन थाल्यो। त्यसपछि निकटता बढ्यो’, अस्मिताले प्रहरी बयानमा भनेकी छिन्, ‘पछिल्लो समय प्रेम सम्बन्धमा थियौं।’
‘सिधा कुरा जनतासँग’सँगका रवि र युवराजपछि यो प्रकरणसँग जोडिएकी अर्की पात्र अस्मिता कार्की हुन्। शालिकरामले कार्यक्रम छोड्ने निष्कर्षमा पुगेपछि ‘सिधाकुरा जनतासँग’कै टोली सदस्यले शालिकरामलाई डिपेन्डेन्टमा अष्ट्रेलिया पठाइदिन ती युवतीसँग भेट गराएका थिए। पत्रकार पुडासैनी विदेश नगई माउन्टेन टेलिभिजनमा कार्यक्रम सुरु गरेपछि दुवैबीच खटपट सुरु भएको थियो। त्यसपछि अस्मिता शालिकरामविरुद्ध ‘सिधाकुरा जनतासँग’ पुगेको तथा रवि र युवराजले आफूविरुद्ध कार्यक्रमको तयारी गरेपछि आत्महत्या गर्न विवश भएको भिडियोमा उल्लेख गरेका छन्।
युवती र सिधा कुरा जनतासँगबीच छलफल भएको बिषय समेत अस्मिताले बयानमा उल्लेख गरेकी छिन्। प्रहरीले विज्ञ टोलीले तीनैजनालाई फरक समयमा बयान लिने रणनीति बनाएको छ। प्रहरीले लिएको बयान थप अनुसन्धान र जाँचका लागि सहायक हुनेछ।‘बयानमा बाझिएका विषयमा थप अनुसन्धान हुन्छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी भनछन्, ‘यो घटनाभन्दा बाहिरका कतिपय विषय पनि खुलेका छन्।’प्रहरीकाअनुसार रवि लामिछानेसँग पनि आजै प्रारम्भिक बयान लिइनेछ। प्रहरीले तीनैजनाको प्रारम्भिक बयानसहित मंगलबार चितवन जिल्ला अदालतबाट थप अनुसन्धान म्याद लिन तयारी गरेको छ।‘मृत्तकको कल डिटेल आएको छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘मंगलबार थप तीनजना प्रतिवादीको कल डिटेल लिएर अनुसन्धान जारी रहन्छ।’
शालिकरामको मोबाइलबाट सबै डाटा रिकोभर-चितवन प्रहरीको अनुरोधमा प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डिएफएल) ले २० साउन २०७६ मा मृत्तक शालिकरामका साथबाट बरामद मोबाइलका सम्पूर्ण डाटा रिकोभर गरेको छ। शालिकरामले बोकेको उक्त मोबाइल सञ्चालन भएदेखिका डाटाहरु रिकभर गरिएका हुन्। पहिला–पहिला मेटाएका फोटो, अडियो र भिडियोे समेत रिकोभर गरिएको हो। ‘मोबाइलमा भएका सबै डाटा रिकोभर भएका छन्। मुद्दाको अनुसन्धानसँग जोडिएका प्रमाण ठहरिने विषय मात्र हामी हेर्नेछौं,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो ‘अनावश्यक विषय सुरक्षित रुपमा प्रहरीले राख्नेछ।’ डिएफएलको प्रतिवेदन शनिबारदेखि चितवनमा खटिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसपी दीपक रेग्मीको टोलीले विश्लेषण गरिरहेको छ। सोमबार अपरान्ह प्रहरीले त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको फरेन्सिक विभागले पठाएको शालिकरामको पोष्टमार्टम रिपोर्टका आधार समेत अनुसन्धान गर्नेछ।
कपडा सुकाउन भन्दै डोरी खरिद-शालिकरामले घटना हुनभन्दा केही घण्टा अघि चितवनको पोखरा बसपार्कस्थित होटल कंगारु नजिकै रहेको होलसेल पसलबाट पाँच मिटर नाइलनको डोरी खरिद गरेको अनुसन्धानमा पुष्टि भएको छ। कंगारु होटल रहेको स्थानबाट सडक वारी रहेको सो पसलमा पुगेका उनले आफुलाई कपडा सुकाउन डोरी चाहिएको भन्दै पाँच मिटर खरिद गरेका थिए। उनी पसलमा गएको क्लोज सर्किट क्यामरामा रेर्कड भिडियो प्रहरीले बरामद गरेको छ। २०७६ भदौ १ गतेदेखि कार्यन्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताअनुसार आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्ति पनि कसुरदार ठहरिन्छ। यही कानुनका आधारमा प्रहरीले रवि लामिछाने, युवराज कँडेल तथा अस्मिता पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ।
रवि समर्थकको आन्दोलनप्रति नेकपा र कांग्रेसले के भने ?पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणलाई लिएर मुलुक तातेको छ । अझ त्यो भन्दा पुडासैनीको मृत्यु अगाडि खिचिएको भनिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले पत्रकार रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अश्मिता कार्कीलाई पक्राउ गरेपछि चितवनमा दैनिक प्रदर्शन चर्किँदो छ । प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन सोमबार स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा समेत जारी गर्नु परेको छ । पक्राउपछि अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएका तीनै जनासँग सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार बयान समेत लिएको छ ।
अनुसन्धानकै लागि प्रहरीको टोली खटिरहेका बेला घटना संवेदनशील भएको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको टोली समेत चितवन पुगेर अनुसन्धानलाई अघि बढाएको छ । चितवनमा भइरहेको आन्दोलनका विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै रवी लामिछानेको समर्थकको प्रदर्शनमा आपत्ति जनाएका छन् ।
पुडासैनी मृत्यु प्रकरणलाई लिएर रविका समर्थकहरुले आन्दोलन चर्काएपछि नेकपा चितवनले आपत्ति जनाएको हो । रविको समर्थनमा भएको प्रदर्शनमा नजान आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । न्यायालयको निर्णयलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी भइरहेको हुलहुज्जत, अराजक गतिविधि तथा लगाइएका नाराहरु परिवर्तनविरोधी भएको नेकपाको ठहर छ । पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली जनताले लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षपछि प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै विरुद्ध नारा लगाउनु नेपाली जनताप्रतिको अपमान भएको पार्टीले उल्लेख गरेको छ ।
यसै घटनालाई लिएर पार्टीको नेतृत्वविरुद्ध नामै किटेर गरिएको नाराबाजी तथा प्रतिक्रियावादीलाई बढवा दिने गरी भएको ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ चलखेल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पार्टीले यस्तो कार्य स्वीकार्य नहुने पनि जनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत घटना गम्भीर रहेको भन्दै सत्य तथ्य छानविन गर्न आग्रह गरेको छ । नेपाली कांग्रेस चितवनले पत्रकार शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा पीडितलाई न्याय तथा निर्दोष नपरुन् र दोषी नछुटुन् भन्ने मान्यताका साथ छानविन गर्न माग गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठ र सचिव उत्तम जोशी द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘जनताको मौलिक हकहरु कुनै पनि असहज परिस्थितिमा पनि हनन हुनु हुँदैन, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यापपालिकाको सम्मान हुनुपर्नेमा नेपाली कांग्रेस चितवन दृढ छ ।’ कांग्रेसले चितवनको पछिल्लो जनप्रदर्शनले सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्दै गइरहेको देखाएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ । विज्ञप्तिमा पछिल्ला पदर्शनमा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सचेत रहन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको नाम लिँदै खुकुरी देखाएर फेसबुक लाइभ, प्रहरीले पक्राउ गर्यो-प्रधानमन्त्रीसहितका शीर्ष नेताहरूलाई अपशव्द प्रयोग गर्दै नाङ्गो खुकुरी देखाएर फेसबुक लाइभ गर्ने एक व्यक्ति बाराबाट पक्राउ परेका छन्। ती व्यक्तिले नाङ्गो खुकुरी देखाउँदै रवि लामिछानेलाई केही भए कसैलाई नछाड्ने धम्की दिएका थिए। प्रहरीका अनुसार फेसबुक लाइभमा ती व्यक्तिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गाली गर्दै मार्ने धम्की दिएका थिए।
फेसबुक लाइभका क्रममा उनले सबै नेतालाई काट्छु, मार्छु भन्दै खुकुरी देखाएका थिए । अपशब्दसमेत प्रयोग गरेकाले ती व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा अपशव्द प्रयोग गर्ने, अभद्र र अमर्यादित टिप्पणी गर्ने, फोटो बिगारेर पोष्ट गर्ने अन्य धेरै जनालाई पक्राउ गर्न टोली खटाइएको छ। शनिबार मात्रै अछाबाट एकजना युवा प्रहरी अधिकारीको फोटो बिगारेर फेसबुकमा हाल्दा पक्राउ परेका थिए।
दुरुत्साहन मुद्दामा मोरङ अदालतका यस्ता आदेश, रविलाई के होला? पत्रकार शालिग्राम पुडासैनीको आत्महत्यापछि सार्वजनिक भएको उनको भिडियोमा आत्महत्या गर्नुको कारण भन्दै दोष लगाइएका टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित तीनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। पुडासैनीको भिडियोमा दोष लगाएकै आधारमा पक्राउ परेका मात्रै होइनन्, लामिछाने र अन्य दुईजनाविरुद्ध आइतबार आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको भन्दै मुलुकी अपराध संहिताअनुसार कारबाही माग गरिएको छ। ठीक एक वर्ष अगाडि २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी संहिताअनुसार मोरङमा मुद्दा पर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। मोरङ सुन्दरहरैंचा नगरपालिका-१ का प्रेम राई झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिए। प्रेमलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको अभियोगमा परेको मुद्दाले उनकी प्रेमिका सन्जु विश्वकर्मा मोरङ कारागारमा थुनामा छिन्।
प्रेमकी श्रीमती बिमलाले परिस्थितिजन्य आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको अभियोगमा किटानी जाहेरी दिएपछि अदालतले सन्जुलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो। उनी दुई महिनादेखि थुनामा छिन्। यस्तै, अघिल्लो वर्ष २०७५ असोज ७ गते १९ वर्षीया ऐश्वर्य आचार्यले झुण्डिएर आत्महत्या गरिन्। मोरङ रंगेली ८ दर्वेसाका ढकप्रसाद आचार्यले छोरीको आत्महत्या स्थानीय विशाल दाहालको दुरुत्साहनका कारण भएको भन्दै जाहेरी दिए। अदालतले दाहालसँग ५० हजार धरौटी लिएर पुर्पक्ष गर्न आदेश दियो। दाहाल धरौटीमा रिहा भए पनि मुद्दा अदालती प्रक्रियामै छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लागू भएको एक वर्षको अवधिमा जिल्ला अदालत मोरङमा तीन वटा मुद्दा दर्ता भएको छ।
ती सबैमा अदालतले वादीकै पक्षमा आदेश दिएको छ। तीनमध्ये एउटा मुद्दाको प्रतिवादी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको जिल्ला अदालत मोरङका श्रेष्तेदार इश्वरमणि ओझाले जानकारी दिए। ऐनको परिच्छेद १२ को दफा १८५ उपदफा १ मा कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन भनिएको छ। त्यसो गरेमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ। दुरुत्साहनसम्बन्धी मुद्दा पीडितको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अघि बढाउँछ।
मोरङको पथरीमा केही महिनाअघि भएको रिना बस्नेतको मृत्युको विषयमा दुरुत्साहन आकर्षित हुने प्रयाप्त आधार रहेको कानुन व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। यद्यपि प्रहरीले त्यस घटनामा भने दुरुत्साहन गरेको मुद्दा अघि बढाएको छैन। यता, पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धानकै चरणमा रहेको छ। प्रहरीले अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी उक्त घटनामा अनुसन्धान सुरु गरेको हो। टेलिभिजन पत्रकार पुडासैनी साउन २० गते चितवनको कंगारू होटलमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएका थिए। मृत्युपूर्व रेकर्ड गराएको भिडियोमा उनले न्युज २४ का कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता भनिने रुकु कार्कीको नाम लिएका थिए।
पत्रकार पुडा’सैनीले डोरी किनेको पसलको सिसिटिभी फुटेजमा के छ ?
पत्रकार शालि’कराम पुडासै’नीले आत्मह’त्या गर्नका लागि डोरी किनेको पसल प्रहरीले फेला पारेको छ । सिसिटिभी फुटेजमा शालिकराम एक्लै गएर बसपार्कमा रहेको एक पसलबाट डोरी किनेको दृश्य फेला परेको छ । प्रहरीले पसलको सिसिटिभी फुटेज लिएर अनुसन्धान थालेको छ । बसपार्कको होटल कंगारुमा दिउँसो ३:३०मा पुगेका पुडा’सैनीले बाहिर निस्किएर डोरी किनेका फुटेजमा देख्न सकिने अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका एक अधिकारीले जानकारी दिए । पत्रकार पुडासै’नीले लुगा सुकाउन भन्दै ५ मिटर डोरी मागेका थिए । दृश्यमा पसलका कामदारले डोरी नापेको र प्लाष्टिकको झोलामा डोरी लगेको देखिएको छ ।
होटलमा पुगेर आत्महत्या गरेका पुडासै’नीको मोबाइलमा रहेको भिडियो सन्देशमा सञ्चारकर्मी रवि लामि’छानेसहित तीन जनाका कारण आफूले आत्मह’त्या गरेको उल्लेख छ । प्रहरीले आत्मह’त्यामा दुरुत्साहनको अनुसन्धानका लागि ला’मिछानेसहित, पत्रकार युव’राज कंडेल र नर्स रुकु भन्ने अस्मि’ता कार्कीलाई हिरासतमा राखेको छ ।
पत्रकार आत्म’हत्या प्रकरण: अदालतमा पेश भए पोष्टमार्टम रिपोर्टसहित यी प्रमाण । पत्रकार शालि’कराम पुडासै’नीको आत्मह’त्या प्रकरणअन्तर्गत प्रहरीले विभिन्न प्रमाण अदालतमा पेश गरेको छ । प्रहरीले मंगलबार पोष्टमार्टम रिपोर्ट, फरेन्सिक ल्याब परीक्षणको रिपोर्ट, चितवनको एक पसलमा पुडा[सैनीले डोरी किनेको सिसिटिभी फुटेजलगायतका विभिन्न प्रमाण अदालतमा पेश गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले अदालतमा पेश गरेका विभिन्न प्रमाणहरुले पुडासै’को मृ’त्युको कारण झु’ण्डिएर रहेको पुष्टि भएको छ । पोष्टमार्टम रिपोर्टमासमेत झु’ण्डिएकै कारण पुडासै’नीको मृ’त्यु भएको उल्लेख रहेको चितवन जिल्ला अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
प्रहरीले विभिन्न पाँचवटा भिडियो क्लिप पनि अदालतमा पेश गरेको छ । ती क्लिपमा चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामि’छाने, पत्रकार युव’राज कँडेल र नर्स रुकु भन्ने अस्मि’ता कार्कीकै कारण आफूले आत्मह’त्या गरेको पुडासै’नीले बोलेको भिडियो छ । फरकफरक भिडियो क्लिपकै कारण सार्वजनिक भएको भिडियोमा हाउभाउ फरक देखिएको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ । प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट आवाज र भिडियो पुडासै’नीको भएको प्रमाणित प्रति पनि अदालतमा बुझाएको छ । पुडासै’नीलाई आत्मह’त्याका लागि दुरुत्साहन गरेको आरोप लागेका लामि’छानेसहित तीन जनाको कल डिटेल, एसएमएस, च्याट संवादलगायतका विभिन्न प्रमाण पनि पेश गरिएको छ ।
प्रहरीले पुडासै’नीले आत्मह’त्या गरेपछि तीन जनाको संवादलाई समेत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोलीले थप अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्लले प्राप्त रिपोर्ट र प्रमाण अनुसन्धानकै क्रममा भएकाले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
र’वि लामि’छानेले हिरासतबाटै गरे यस्तो गम्भीर गुनासो, अब के होला ? सञ्चारकर्मी शालि’कराम पुडा’सैनी आत्म’हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका न्यूज ट्वेन्टी फोरका कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेले आफू प्रहरी हिरासतभित्रै असुरक्षित रहेको गुनासो पोखेका छन्। श्रीमती निकिता पौडेलको फेसबुकमार्फत बुधबार साँझ लामिछानेले प्रहरीले आफूलाई पाँच वर्ष नै थुन्ने नियत देखाएको आरोप पनि लगाएका छन्।
हिरासतबाटै रवीले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीप्रति केही प्रश्न पनि उठाएका छन्। ‘एसपी दानबहादुर मल्लजीले शालि’कजीको भिडियो प्रहरीसँग मात्रै सुरक्षित छ भनेर दाबी गरिहेका बेला उक्त भिडियो को बाट कसरी लिक गरियो, भन्ने विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने थियो कि थिएन, र अर्को कुरा यदी त्यो भिडियो परिवारका सदस्यबाट बाहिरिएको हो भने परिवारलाई पनि उक्त भिडियो बाहिरिएको विषयमा सोधपुछ गर्नु पर्छ कि पर्दैन?’ उनले सोधेका छन्।
आफूलाई पाँच वर्ष जेलमा सडाउने षडयन्त्र भएको दाबी गर्दै रवीले हिरासतबाट बाहिर निस्किन पाए पाँच मिनेटमै याे घटनामा आफ्नाे संलग्नता नभएकाे प्रमाणित गरिदिन सक्ने दाबी पनि गरेका छन्। रवी पत्नी निकिताले साे भिडियाे बाहिरिएकाे सम्बन्धमा चितवनका एसपी मल्लसहित तीन जनाबिरुद्ध बुधबार काठमाडाैं प्रहरीमा जाहेरी दिन खाेज्दा प्रहरीले जाहेरी लिन मानेकाे थिएन। गत साउन २१ गते चितवनमा मृत भेटिएका पत्रकार पुडासै’नीले मृत्यु अघि पूर्व सहकर्मी रवी लामि’छानेसहित तीन जनालाई पाेलेकाे भिडियाे सार्वजनिक भएपछि उनीहरु प्रहरी हिरासतमा छन्। मंगलबार दाेस्राेपटक थप पाँच दिनका लागि म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएकाे छ।
यस्तो छ उनको स्टाटस: ‘शालिक राम पुडा’सैनीको घटनाको बिषयमा मैले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सघाउ पुर्याउछु भनेको थिए र पाँचौ दिन सम्म हिरासतमा रहदा मैले मेरा तर्फबाट पूर्ण रुपमा प्रहरीलाई सहयोग गरे पनि । म, र मेरा सहकर्मी युवराज कडेल र यो घटनामा नाम जोडिएकी अस्मिता कार्की रुकुको बयान लिए पश्चात यो घटनामा हाम्रो कहि कतै संग्लनता नदेखिएको पोईन्ट वाईज स्पष्ट भईरहेको बेला फेरी पाँच दिनको म्याद थप्दै प्रहरीले चलाएको कदम हामीलाई फसाउँने गरी सुनियोजित र नियतपूर्ण रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
बयानका लागि मेरा भनाई समावेश गरिरहदा म हिरासतबाटै केही प्रश्नहरु पनि गर्न चाहन्छु । जव, कि प्रहरीको बर्दी लगाएका बेला एसपी दानबहादुर मल्ल जीले शालि’कजीको भिडियो म्यासेज प्रहरीसँग मात्र सुरक्षित रहेको दाबी गरिरहेका बेला उक्त भिडियो को, बाट कसरी लिक गरियो भन्ने बिषयमा अनुसन्धान अगाडी बढाउँनु पर्ने थियो कि थिएन ? र अर्को कुरा यदि त्यो भिडियो परिवारबाट बाहिरिएको हो भने परिवारलाई पनि उक्त भिडियो सार्वजनिक भएको बिषयमा सोधपुछ गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?
यो घटनालाई लिएर प्रहरीले मलाई ५ बर्षनै थुन्ने नियत देखाएको हुँदा देश तथा विदेशमा रहनु भएका मेरा सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने मलाई हिरासतबाट निकालेको ५ मिनेटभित्रै यो घटनामा मेरो कहि कतै संग्लनता छैन भनेर म प्रमाणित गर्न सक्छु । ” रवि लामिछाने निकिताको उजुरी प्रहरीले किन लिएन ? आत्मह’त्या दुरुत्साहनको अभियोगमा प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका पत्रकार रवि लामि’छानेकी श्रीमती निकिता पौडेल पनि प्रहरीकहाँ पुगेकी छन्। उनी भिडियो किर्ते गरी रविलाई फसाइएको भन्दै बुधबार उजुरी दर्ता गर्न महानगरिय प्रहरी परिसर टेकु पुगेकी हुन्।
तर, प्रहरीले उनको उजुरी दर्ता गर्न मानेन। भिडियोको विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै प्रहरीले उनलाई फिर्ता पठाएको हो। ‘उहाँहरु उजुरी लिएर आउनुभएको थियो। उहाँको उजुरी हाम्रो कर्यक्षेत्रमा नपर्ने भएकाले सम्बन्धित ठाउँमा गएर उजुरी दिन सुझाव दिएर हामीले फर्काएका हौं’, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले भने। प्रहरी अनुसन्धानमा रहेको पत्रकार शालि’कराम पुडासै’नीको आत्मह’त्यासम्बन्धी भिडियो किर्ते गरेको आरोप निकिताले विभिन्न व्यक्तिलाई आरोप लगाएकी छन्।
मंगलबार रविसहित तीन जनालाई दोस्रो पटक म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। लामि’छानेसहित रुकु कार्की (अस्मिता) र युवराज कँडेलविरुद्ध शालि’कराम पुडा’सैनी आत्मह’त्या दुरुसाहन मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ। शुक्रबार चितवन जिल्ला अदालतले रविसहित तीनैजनालाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। रवि र युवराजलाई प्रहरीले बिहीबार साँझ न्युज २४ च्यानलको कार्यालय पानीपोखरीबाट पक्राउ गरेको थियो। बिहीबार दिउँसो पक्राउ परेकी अस्मितासहित तीनैजनालाई प्रहरीले बिहीबार राति चितवन पुर्‍याइको थियो।
पुडासै नीकी पत्नी सम्झना पुडासै नीले पनि आइतबार काठमाडौं प्रहरी परिसरमा पुगेर लामि’छानेसहित तीनविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी छन्। पुडा सैनीले आत्मह त्याअघि आफूलाई मर्न बाध्य पारेको भन्दै रेकर्ड गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनीहरु पक्राउ परेका थिए। उक्त भिडियो पुडासै’नीको मोबाइलमा फेला परेपछि प्रहरीले फरेन्सिक जाँच गर्दा भिडियो आफैं खिचेको पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको छ। पुडासै’नीकै आवाजको भिडियो रहेको पुष्टिपछि थप अनुसन्धान गर्न लामिछाने, कार्की र कँडेललाई पक्राउ गरिएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीले किन दर्ता गरेन लामिछाने पत्नीको जाहेरी ? पत्रकार शालि’कराम पुडा’सैनी आत्महत्या प्रकरणमा ‘मृ’त्युअघि रेकर्ड भएको भिडियो’ तोडमोड गरी सार्वजनिक गरेको भन्दै उजुरी दिन बुधबार निकिता पौडेल प्रहरी कहाँ पुगिन् । आत्म’ह’त्यामा दुरुत्साहन गरेको कसूरमा पक्राउ परेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने पत्नी पौडेलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनका प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्ल, जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ र नेपाल आजका सम्पादक संकेत कोइरालाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन खोजेकी थिइन् ।
मुलुकी अपराध संहिताको लिखतसम्बन्धी कसूरमा उल्लेखित ‘कुनै झुठा लिखत वा झुठा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय झुठा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा निजले कीर्ते गरेको मानिने’ व्यवस्थालाई टेकेर तयार पारिएको जोहरीसहित अधिवक्ता सुनिल पोखरेल पनि प्रहरी कार्यालयमा पुगेका थिए । तर, काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुले ‘विद्युतीय कीर्ते कसूर’ शीर्षकमा तयार पारिएको जोहरी लिन मानेन ।
क्षेत्राधिकारभित्र परेनः प्रहरी । काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदीकाअनुसार, क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले जाहेरी दर्ता नभएको हो । ‘जुन विषयवस्तुमा जोहरी दिन खोजिएको छ, त्यही विषय चितवन प्रहरीमा अनुसन्धान भइरहेको जोहरी दर्ता नभएको हो’, उनले भने, ‘घटनास्थल चितवनमा भनिएको छ र चितवनकै प्रहरीलाई विपक्षी बनाएर काठमाडौंमा जोहरी आएकाले लिन मिलेन ।’नबुझेको विषयमा संघीय प्रहरी कार्यालय वा प्रदेश प्रहरी कार्यालय हुँदै उजुरी दिन मिल्ने सुवेदीले बताए । परिसरको मुद्दा शाखाका एक अधिकृत भने ‘छेडछाठ’ भयो भनिएको भिडियोबारे वैज्ञानिक जाँचको रिपोर्ट खोजिने भएकाले अहिल्यै जोहरी लिनु हतार हुने बताए । ‘कुन ओरिजिनल र कुन डुब्लिकेट भन्ने विषय अदालतमा पुगेपछि छुट्टिन्छ । जोहरी नै दिनु परे सरकारी वकिलमा मिसिल पेश गरुञ्जेल पर्खिनुपथ्र्यो’, उनले भने ।
के भन्छिन् निकिता ? लामिछाने पत्नी निकिताले भने पुडासैनी परिवारको जाहेरी प्रहरीले काठमाडौँंमा लिएपनि आफ्नो नलिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । ‘मैले हाम्रो चाहिँ किन नलिने भनेर पनि सोधेको थिएँ तर, विभिन्न भूमिका बनायो’, पौडेलले भनिन् । काठमाडौंमा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको उनले बताइन् । ‘सरकारी वकिल कार्यालयमा अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने भन्नु भएको छ’, पौडेलले सुनाइन्, ‘यहाँबाट भएन भने कानून व्यवसायीसँग सल्लाह गरेर सोही बमोजिम अगाडि बढ्छु ।’पुडासैनीलाई आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको अभियोगमा रविसहित तीन जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई सोमबार मात्र थप ५ दिन थुनामा राख्न अदालतले आदेश दिएको छ । पुडासैनीले साउन २० गते भरतपुरस्थित एक होटलमा आत्महत्या गरेका थिए ।
सरकारी वकिलको कार्यालय किन पुगिन् निकिता पौडेल ?
प्रहरीले उजुरी लिन नमानेपछि रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं पुगेकी छिन् । सरकारी विद्युतिय प्रमाण किर्ते गरेको कसुरमा उजुरी दर्ता गर्न महानगरिय प्रहरी परिसर टेकु पुगेकी निकिताको प्रारम्भिर उजुरी लिएर छलफल पछि प्रहरीले फिर्ता गरेको थियो । प्र्रहरीले उजुरी दर्ता लिन नमानेपछि निकिता बुधबार अबेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं पुगेकी छिन् ।
‘उहाँहरु सरकारी वकिलको कार्यालय आउनु भएको छ’ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका सहन्यायाधीवक्ता चन्द्रकान्त खनालले भने,‘यो विषयमा हामी छलफलमै छौं ।’मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता ऐन–२०७४ को दफा ५ को उपदफा १ मा प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न इन्कार गरेमा उजुरी दिने व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय वा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । निकिताको उजुरीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्ल, प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा जनआस्था साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ र नेपालआजडट्कम नाम अनलाइन समाचार पोर्टलका सम्पादक संकेत कोइरालालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा पत्रकार लामिछानेसहितका तीन जना चितवन प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन् । गत शुक्रवार पाँच दिनको लागि जिल्ला अदालतले थप अनुसन्धकानको लागि प्रहरीलाई समय दिएको थियो । मंगलबार(हिजो) प्रहरीले रविसहितका तीन जनामाथिको अनुसन्धान नसकिएको भन्दै भन्दै पुन समय थप गर्न माग गर्दै अदालतमा पेश गरेको थियो । अदालतले थप अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीलाई पाँच दिनको समय दिएको थियो । आत्महत्या गर्नुअघि पत्रकार पुडासैनीले आफूले आत्महत्या गर्नुमा पत्रकार लामिछानेसहित तीन जनाको कारण रहेको बताएको भीडियो रेकर्ड गरेका थिए । तर उक्त भिडियो किर्ते गरि सार्वजनिक गरिएको भन्दै रवि पत्नी निकिताले उजुरी गर्न लागेकी छिन् ।
म प्रहरीभित्रै असुरक्षित छु : रवि लामिछाने । शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका टिभी कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेले आफू प्रहरीभित्रै असुरक्षित रहेको बताएका छन्। बुधबार साँझ श्रीमती निकिता पौडेलको फेसबुकमार्फत् स्टाटस लेख्दै लामिछानेले यस्तो बताएका हन्। शालिकराम पुडासैनीको मोबाइलमा भेटिएको भिडियो सुसाइड नोटमा रवि लामिछाने अर्का पत्रकार युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की नाम उल्लेख गरेको भिडियो बाहिरिएपछि प्रहरीले उनीहरू तीनै जनालाई साउन ३० गते पक्राउ गरेको थियो।
चितवन जिल्ला अदालतले उनीहरू तीनै जनाको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि पक्राउ सुरुमा ५ दिनको हिरासतमा रहेका थिए। अदालतले पुनः थप ५ दिन प्रहरी हिरासतमा नै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। रविकी श्रीमती पौडेलले आजै महानगरीय अपराध महाशाखा टेकु पुगेर प्रहरीसँग भएको पुडासैनीको भिडियो सुसाइड नोट अनधिकृत रुपमा बाहिर पुर्‍याएको भन्दै विद्युतीय कारोबार ऐनमार्फत् सजाय मागदाबी गर्दै उजुरी गरेकी थिइन्। तर प्रहरीले सो उजुरी दर्ता नगरेपछि रविले पौडेलको फेसबुक मार्फत केही प्रश्न समेत उठान गरेका छन्।